XOG: Ciidamada Kenya oo laga saaray Garoonka diyaaradaha Kismaayo, Yaase ka dambeeyey amarka lagu saaray? – Puntlandtimes
KISMAAYO(P-TIMES)- Wararka saacadihii ugu dambeeyey kasoo baxaya magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland ayaa sheegaya in ay Saraakiisha midowga Africa ee AMISOM, Saldhigooduna yahay magaalada Muqdisho ay amreen in ay ka baxaan Garoonka diyaaradaha iyo Dekeda Kismaayo ciidamadda Kenya ee katirsan howlgalka AMISOM.
Ciidamada Kenya ayaa talaabada looga qaaday ammaanka labada goobood-ba lagu sheegay sababo la xariira isbedelada inta badan lagu sameeyo ciidamada Midowga Africa ee AMISOM, balse warar soo baxaya ayaa sheegaya in lagu aadiyey waqti ay soo dhaw-dahay doorashada Madaxtinimada ee maamulkaas.
Amniga Madaarka diyaaradaha ee Kismaayo ayaa lagu wareejiyey ciidamo ka socda dalka Itoobiya oo dhawaan la geeyey Jubbaland, kana tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, waxaana ay sheegeen in ay sugayaan oo kaliya ammaanka madaarka.
Wararku waxay cadeynayaan in ay talaabadan ka dambeysay markii ay musharaxiin badan oo u taagan qabashada xilka Madaxweyne-nimada Jubbaland doorashada dhacaysa bisha August ay cabasho ka muujiyeen qaabka ay ciidamada Kenya u sugayaan ammaanka garoonka.
Saraakiisha cusub ee la wareegay shaqada Amniga garoonka diyaaradaha ayaa la kulmay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo markale isku diyaarinaya soo laabashadiisa, waxayna u sheegeen in ay dhinacyada oo dhan u dhaxeeyaan oo ay doonayaan sugida Amniga oo kaliya.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa ku qanacsaneyn talaabada ay qaaday AMISOM, isagoo u arka mid ladoonayo in musharaxiinta dawladda Faderaalku ay taageerayso loogu keeni karro gaadiid dagaal iyo wax kasta oo ay doonayaan, iyadoo horey dhaqdhaqaaq u ahaa mid xaniban.